Jawar & Jigjiga iyo dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) – Radio Daljir
Seteembar 3, 2019 2:05 g 0
Wararkii ugu danbeeyey ee deegaanka, sida ay nala qaysadeen wariyayaasha Daljir ee DDS iyo waliba bulshada deegaanada kala duwan ee gobolada DDS waa sida hoose:
1) August 26 – 3 Sept – Magalaada Jigjiga ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyey waxaana marti u ah Jawar Maxamed, hoggaamiyaha maleeshiyo beeleedka Oramada ee loo yaqaan QEERO, barakicin ba’anna ku haya Soomaalida Deegaanka. Duleedka jigjiga, dhanka Qoloji iyo Tulliguuleed, waxaa ku soo barakacay boqollaal kun oo Soomaali ah oo ay soo barakiciyeen isla maleeshiyaadka Qeero.
Madaxweyne Mustafe Cagjar ayaan illaa iyo hadda ka hadlin sababta uu Jawar Maxamed maanta marti ugu yahay Jigjiga.
Wasiirka Difaaca Itoobiya, Lemma Megersa, horayna u ahaa Madaxweynaha gobolka Oromada, iyo Jawar Maxamed ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin tiirdhexaadka malleeshiyaadka Oromada ee QEERO.
Isla magaalada Jigjiga, kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa suuqa weyn ee magalaada Jigjiga dhex mara ku jiiray mooto Bajaaj. Sidii hore looga bartay, lama filayo in wax magdhow ah ay bixiyaan ciidamada Itoobiya.
2) August 26 – Degmada Tulliguuleed dhanka qabalaha Malowleh ee gobolka Fafaan waxaa mar kale weerar la begsaday maleeyshiyaadka Oromada. Weerarkan ugu danbeeyey waxaa ku dhintaay hal qof oo shacab oo magaciisa lagu sheegay Jamal Cabdi.
3) August 30 – Degmada Shillaabo ee gobolka Qoraxay waxa ay ciidamada Itoobiya rasaas nool u adeegsadeen dad shacab waxaana ku dhaawacmay gabadh magaceedu yahay Xamdi Cabdirashid
4) August 31 – Qabalaha Laab ee gobolka Shabeelle waxaa ka taagan xiisad xooggan oo u dhexeysa laba beelood, waxaana isla markiiba goobta garaay Liyuu Booliska si ay u kala dhex galaan labada beelood. Rasaas ay beeluhu isku fureen 2 qof ayaa ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay 7 kale.
5) September 3 – Xerada weyn ee qaxootiga ee Qoloji kana agdhow Jigjiga oo ay ku noolyihiin boqollaal kun oo Soomaali oo ay soo barakiciyeen maleeshiyaadka Qeero ee Oromada, una badan haween iyo carrur, ayaa maamulka Madaxweyne Mustafe Cagjar waxa uu qorsheyanaa in xerada la xiro, barakiciyaashana loo raro deegaanada qabiilka qof walbaa ka soo jeedo.
Xerada Qoloji ayaa waxa ay markhaati u tahay barakaca baahsan ee lagu hayo Soomaalida Itoobiya, waxa ayna noqotay astaan muujisa waxqabad la’aanta Madaxweyne Mustafe Cagjar. Qaxootiga Qoloji oo ay guryahoodi iyo beerohoodii dheceen Oromadu ayaan illaa iyo hadda wax gacan ah ka hilin maamulka Madaxweyne Mustafe Cagjar iyo kan dowladda Itoobiya.
Qorshaha xiritaanka xerada Qoloji ayaa loo fasirtay qorshe uu Madaxweyne Mustafe Cagjar oo kaashanaya Dowladda Itoobiya uu u rabo in uu indhaha caalamka kaga qariyo barakacayaasha Qoloji.
Imaatinka Jigjiga ee Jawar Maxamed ayaa sidoo kale waxaa la saadaalinayaa in uu hordhac u yahay wada tashi xiritaanka xerada Qoloji.
Xilligii uu Wasiirka Cusub ee Difaaca Itoobiya, Lemme Megerse, ahaa Madaxweynaha Oromiya, waxaa degmada Balbalayti ka dhacay xasuuq daran oo loo gaystay Soomaalida, badanaa intii ka badbaaday xasuuqaas waxa ay maanta qoxooti ku yihiin xerada Qoloji ee duleedka Jigjiga. Sidaas darteed, badanaa Soomalida deegaanka, siiba deegaanka Qoloji iyo Tulliguuleed, ayaa u arka maadaama ay talada dalka maanta hayaan isla kuwii shalay xasuuqa gaystay in hadda uu socdo qorshe lagu tirtirayo raadkii xasuuqa Balbalayti iyo raadka barakaca baahsan ee Oramadu ku hayso Soomalida deegaanka.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 129 Wararka 18275